China Kujekesa Mumiriri BT-808 Mugadziri uye Mutengesi | BGT
Kujekesa Mumiriri BT-808
BT-808 (Hyper Kujekesa) chitsva chakagadzirwa chinobatanidza kujekesa mumiririri kuti iwedzere kupisa kwekristaro nekujekesa kuri nani.
Inogona kushandiswa muPP, PET, PA (Nylon) uye zvimwe zvinhu.
BT-808 (Hyper Kujekesa) iri nyowani yakavandudzwa inosanganisa Kujekesa Mumiriri nekuita kwakanyanya kuwedzera iyo tembiricha tembiricha, kujekesa, kupisa kupisa, kuomarara kwePP nezvimwe zvinhu.
Zvakanakira kuwedzera BT-808:
Inogona kuchinja ehupfumi ehupfumi ePP zvinhu, kuwedzera yakasimba tensile, flexural modulus uye kukanganisa kwezvinhu. UchishandisaBT-808, iyo nzvimbo yekugadzirisa ichawedzerwa nekuwedzera kugadzikana mukukanganisa kwe oxidative uye kudzokorora kugadzirisa. Hazvina kunhuhwirira zvachose uye hazvitadzise kuravira kwechikafu.
Poda chena ine yakati bhuruu
PP, PET, PA (Nylon) nezvimwewo.
Polymer yakagadziridzwa na Nyukireya Mumiriri, Haingochengetedze chete maitiro epakutanga epolymer, asi zvakare ine nani kuita mutengo chiyero pane zvakawanda zvinhu zvine yakanaka yekugadzirisa mashandiro uye hwakawanda hwekushandisa. Uchishandisa Nyukireya Mumiriri mu polypropylene haingotore nzvimbo yegirazi chete, asi zvakare kutsiva mamwe ma polymer senge PET, HD, PS, PVC, PC, nezvimwewo pakugadzira chikafu kurongedza, kurapa kuitisa, tsika yetsika yekupa zuva nezuva, kujekesa kuputira uye imwe yepamusoro giredhi tafura.
Pashure: Kunaka Agent
Zvadaro: Kujekesa Mumiriri BT-9803M